नक्षत्र र राशिबीचको अन्तर कसरी ? नक्षत्रहरुको विशेषता यस्ता छन्
काठमाडौं । नक्षत्र र राशिकोबीच के अन्तर छ ? यो धेरैलाई चासो लाग्ने विषय हो । तर, यहि विषयमा बेलाबेलामा टाउको दुखाउने समेत गरेको पाइन्छ । दुनियाँमा जतिपनि मानिसहरु छन् उनीहरुको सबैको बनावट, रङ्ग, गुण, स्वभाव एवं कार्य क्षेत्र इत्यादि-इत्यादिमा भिन्नता हुन्छ । किनकी तारा मण्डललाई ग्रह, नक्षत्र एवं राशिमा विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्ने गरिन्छ र त्यही ग्रह र नक्षत्रको आधारमा मानिसको बनोट र वर्णको निर्धारण हुन्छ । नक्षत्रको पौराणिक महत्व के हो ? नक्षत्र र राशिबीच के अन्तर छ ? भन्ने विषयमा संक्षिप्त जानकारी दिने तयारी गरिएको छ ।
नक्षत्र वैदिक ज्योतिषका अनुसार नक्षत्र, पञ्चाङ्गको एकदमै महत्वपूर्ण अङ्ग हो । भारतीय ज्योतिष, नक्षत्रलाई चन्द्र महल पनि भन्ने गरिन्छ। मानिसहरु ज्योतिषीय विश्लेषण र सटीक भविष्यवाणीहरुका लागि नक्षत्रको अवधारणाको उपयोग गर्दथे। शास्त्रमा नक्षत्रको कूल संख्या २७ बताइएको छ । अभिजित नक्षत्रलाई समेत लिँदा कुल संख्या २८ नक्षत्र हुन्छ ।
अभिजित नक्षत्रबाहेकका २७ नक्षत्रहरु अश्विनी नक्षत्र भरणी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हस्ता नक्षत्र चित्रा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र विशाखा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र पूर्वाषाढा नक्षत्र उत्तराषाढा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मघा नक्षत्र रेवती नक्षत्र
नक्षत्र वैदिक ज्योतिषमा २७ नक्षत्र रहेको उल्लेख छ। आकाशमा ताराको समूहहरुलाई नक्षत्र भनिन्छ। वैदिक ज्योतिषमा नक्षत्रलाई एकदमै महत्वपूर्ण मानिएको छ । वेद जस्तो प्राचीन ग्रन्थमा समेत नक्षत्रको बारेमा विशेष जानकारी दिइएको छ। नक्षत्र आफ्नो प्रभावद्वारा कुनैपनि व्यक्तिको जीवनलाई बदल्ने क्षमता राख्दछ। यसकारण मानिसहरु नक्षत्रलाई अनुकूल गर्नको लागि उनीद्वारा सम्बन्धित ग्रहहरुको पूजा-पाठ र व्रत आदि गर्दथे। शास्त्रमा नक्षत्रहरुको कूल संख्या २७ बताईएको छ।
नक्षत्रको पौराणिक महत्व पुराणहरुमा यी २७ नक्षत्रको पहिचान दक्ष प्रजापतिकी छोरीहरुको रुपमा मानिन्छ । यी ताराहरुको विवाह सोम देव अर्थात् चन्द्रमाको साथ भएको थियो। चन्द्रमालाई यी सबै रानीहरुमा सबैभन्दा प्रिय थिइन् रोहिणी । जसको कारणद्वारा चन्द्रमालाई श्रापको सामना पनि गर्नु परेको थियो । वैदिक कालमा पनि नक्षत्रको आफ्नै अर्कै महत्व थियो ।
पुराणका अनुसार ऋषि मुनिहरुले आकाशको विभाजन १२ हिस्सामा गरिएको थियो । जसलाई हामी १२ अलग-अलग राशीहरु 'मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन' को नामद्वारा चिनिन्छ । यसको सूक्ष्‍म अध्‍ययनकोलागि उनले यसको २७ भागमा बाँडिएको छ । जसको परिणामस्वरूप एक राशिको भित्र लगभग २.२५ नक्षत्र आउँछ। चन्द्रमा आफ्नो कक्षमा चल्दा पृथ्वीको एक परिक्रमा गर्न २७.३ दिनमा पूरा गर्दछ। वैदिक ज्योतिषीका अनुसार चन्द्रमा प्रतिदिन तकरीबन एक भाग (नक्षत्र)को यात्रा गर्दथे। ज्योतिष शास्त्रमा सही र सटीक भविष्यवाणी गर्नको लागि नक्षत्रको उपयोग गरिन्छ ।
नक्षत्रद्वारा कुनैपनि व्यक्तिलाई सोच्ने शक्ति, अन्तर्दृष्टि र उसको विशेषताको विश्लेषण सजिलै गर्न सकिन्छ । यहाँसम्म कि नक्षत्र हाम्रो दशाको अवधिको गणना गर्नमा पनि मद्दत गर्दछ। मानिसहरु ज्योतिषीय विश्लेषण र सटिक भविष्यवाणीहरुको लागि नक्षत्र अवधारणाको उपयोग गर्दथे।
नक्षत्र र राशिको बीच के छ अन्तर ? यदि हामी आकाशको १२ समान भागमा विभाजित गर्दछौं भने प्रत्येक भागलाई राशि भनिन्छ। तर, यदि आकाशलाई २७ समान भागमा विभाजित गर्दछौं भने प्रत्येक भागलाई नक्षत्र भनिन्। अब यदि हामी ३६० डिग्रीलाई १२ भागमा बाँड्ने गर्दछौं भने हामी एक राशि चिह्न ३० डिग्रीको रूपमा प्राप्त हुन्छ। यसै प्रकार, नक्षत्रको लागि यदि हामी ३६० डिग्रीलाई २७ भागमा बाँडिन्छ भने एक नक्षत्र १३.३३ डिग्री (लगभग) को रूपमा आउँछ । यसकारण, नक्षत्रको कुल संख्या २७ र राशीहरुको कुल संख्या १२ हुन्छ । नक्षत्र एक छोटो हिस्सा हो र राशि एक ठूलो हिस्सा हो। कुनैपनि राशि चिह्नमा सवा दुई नक्षत्र आउने गर्दछ।